ပုံမှန်မော်ရိုကိုသကြားလုံးနှင့်အချိုပွဲများ Absolut ခရီးသွားခြင်း
Isabel | 16/04/2021 10:55 | အဆင့်မြှင့်တင် 16/04/2021 11:55 | မော်ရိုကို
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ gastronomy ဖြစ်သည်။ မော်ရိုကိုမှတစ်ခုမှာပါဝင်ပစ္စည်းများများစွာနှင့်ဟင်းလျာများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ဘာဘရာ၊ အာရပ်သို့မဟုတ်မြေထဲပင်လယ်ယဉ်ကျေးမှုစသောသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်မှုများစွာကြောင့်တိုင်းပြည်သည်အခြားလူမျိုးများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မွှေးသောဆားငန်သောအရသာများနှင့်နံ့သာမျိုးနှင့်မွှေးရနံ့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်သန့်စင်ပြီးရိုးရိုး gastronomy ဖြစ်သည်။
သို့သော်မော်ရိုကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုတစ်စုံတစ်ခုသောလူသိများလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏လက်ရာမြောက်သောအချိုပွဲများအတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချက်ပြုတ်လိုစိတ်ပြင်းထန်လျှင်သွားချိုကောင်းမည်ဆိုလျှင်မော်ရိုကိုရှိအကောင်းဆုံးသကြားလုံးအချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အောက်ပါစာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
1 အဘယ်သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ Moroccan pastries အတွက်အသုံးပြုကြသည်?
2 ထိပ်တန်းမော်ရိုကိုသကြားလုံး 10 ခု
2.3 Gazelle ဦး ချို
အဘယ်သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ Moroccan pastries အတွက်အသုံးပြုကြသည်?
မော်ရိုကိုသကြားလုံးများသည်အဓိကအားဖြင့်ဂျုံမှုန့်၊ နှမ်း၊ အခွံမာ၊ ပျားရည်၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်သကြားများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့သောအလွန်လူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများရလဒ်ခဲ့သည်။
ထိပ်တန်းမော်ရိုကိုသကြားလုံး 10 ခု
နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သောအရှေ့အလယ်ပိုင်းအစားအစာကြယ်ပွင့်အချိုပွဲတစ်ခု။ ၎င်း၏မူလအစသည်တူရကီနိုင်ငံ၌ရှိသော်လည်းကမ္ဘာအနှံ့ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှအမျိုးမျိုးသောအခွံမာသီးများပါ ၀ င်သောမျိုးကွဲများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဒါဟာထောပတ်, tahini, သစ်ကြံပိုးအမှုန့်, ​​သကြား, walnuts နှင့် phyllo မုန့်စိမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ပျားရည်ထဲမှာရေချိုးပြီးအခွံမာသီးနဲ့ filo pastry အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့ချိုမြိန်တဲ့အရသာရှိတဲ့အချိုပွဲတစ်ခုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
စာရွက်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအိမ်တွင်အလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်၎င်းသည်မျှတသောအချိုပွဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသေးငယ်သောအပိုင်းများခွဲခြားရမည်။ ၎င်းသည်မက်ထရဘမှမလာသော်လည်းမော်ရိုကိုတွင်အများဆုံးစားသုံးသည့်သကြားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်ကလေးများကြားတွင်မော်ရိုကိုသကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုမှာ Seffa ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းအလွန်ချစ်မြတ်နိုးရသောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ဆားငန်သောချိုမြိန်သောဗားရှင်းရှိသည်။ ၎င်းကိုအထူးရက်များအခါသမယများ၊ မိသားစုစုဝေးမှုများ၊ ကလေးမွေးဖွားချိန်သို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ချိုင့်နေတဲ့ Seffa ရဲ့ version ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သင်လိုအပ်တာက couscous သို့မဟုတ်ဆန်ခေါက်ဆွဲ၊ ထောပတ်၊ sliced ​​almonds, icing သကြားနဲ့ kinnamon တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အရသာရှိသောနေ့ရက်များ၊ သံပုရာအခွံ၊ ချောကလက်၊ ပစ္စတိုရှီသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်များကိုထည့်သွင်းသူများသည်အခြားအရာဝတ္ထုများထည့်ခြင်းဖြင့်မိသားစု၏အရသာနှင့်အညီလိုက်ဖက်သောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Seffa သည်ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်သောကြောင့် Marcancan သကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဗာဒံသီး၌ကယ်လစီယမ်ပမာဏများစွာရှိသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် Seffa ၏အစိတ်အပိုင်းသည်သင့်ဘက်ထရီများကိုကျန်းမာစေ။ အရသာရှိသောနည်းလမ်းများဖြင့်အားပြန်သွင်းရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုထားသည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Gazelle ဦး ချို
မော်ရိုကိုအကောင်းဆုံးသကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုမှာ kabalgazal သို့မဟုတ် gazelle horn များဖြစ်သည်အာရပ်ကမ္ဘာရှိအလှအပနှင့်ကြော့ရှင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောဒီသတ္တဝါ၏ ဦး ချိုများနှင့်ဆင်တူသည့်ဗာဒံသီး၊
ဤကျော်ကြားသောကွေးညွှတ်သည်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိမော်ရိုကိုသကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ဖက်ရည်နှင့်အထူးအခါသမယများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအလွန်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ထောပတ်၊ ထောပတ်၊ သစ်ကြံပိုး၊ သကြား၊ ဖျော်ရည်နှင့်လိမ္မော်ခွံတို့ကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, gazelle ချို၏အတွင်းပိုင်းငါးပိများအတွက်မြေပြင်ပျားရည်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ပန်းပွင့်ရေကိုအသုံးပြုကြသည်။
ပုံရိပ် Maroquin အစားအစာ
« Moroccan churro »အဖြစ်လူသိများ, sfenj သည်နိုင်ငံ၏မည်သည့်မြို့မဆိုရှိလမ်းဘေးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သောမော်ရိုကိုနိုင်ငံ၏သကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ပုံသဏ္aာန်ဒိုးနတ်သို့မဟုတ် donut ဆင်တူနှင့်ပျားရည်သို့မဟုတ်အမှုန့် icing သကြားနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ အထူးသဖြင့်နံနက်ခင်း၌အရသာရှိသောလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှင့်သောက်သုံးလိုက်သောမော်ရိုကိုလူမျိုးများသည်၎င်းကို aperitif အဖြစ်ယူကြသည်။
sfenj ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အလှဆင်ရန်တဆေး၊ ဆား၊ ဂျုံ၊ သကြား၊ နွေးသောရေ၊ ရေနံနှင့် icing သကြားတို့ဖြစ်သည်။
Alahuita အစားအစာများအနက်အရသာအရှိဆုံးသောအစားအစာများမှာဆားငန်ခေါက်ဆွဲများ (တူနာ၊ ကြက်သား၊ သိုးမွှေး) နှင့်ချိုသောနှစ်မျိုးစလုံးနှင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သော briwats၊ puff ချိုင့်ငယ်များနှင့်ချိုသောအစားအစာများဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ပွဲတော်များနှင့်ပါတီပွဲများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
၎င်း၏သကြားဗားရှင်းတွင်ဘရိုင်ဝိတ်များသည်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိမော်ရိုကိုသကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တြိဂံပုံသဏ္inာန်ရှိသောကိတ်မုန့်လေးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး၎င်း၏မုန့်စိမ်းမုန့်စိမ်းကိုပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်သည်။ ဖြည့်စွက်မှုအတွက်မူ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်လိမ္မော်ရောင်ပန်းပွင့်ရေ၊ ပျားရည်၊ သစ်ကြံပိုး၊ ဗာဒံသီး၊ ထောပတ်နှင့်သစ်ကြံပိုးများကိုအသုံးပြုသည်။ ပျော်စရာပါ
နောက်ထပ်လူကြိုက်အများဆုံးမော်ရိုကိုသကြားလုံးများထဲမှ "ဆင်းရဲသားရဲ့ကိတ်မုန့်" ဟုလည်းလူသိများသော trid ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်မနက်စာစားသောအခါသောက်လေ့ရှိသည်။ ရိုးရှင်းပေမယ့်အရည်ရွှမ်း။
၎င်းတို့၏အာဟာရစွမ်းအားမြင့်မားမှုကြောင့် chebakias သည် Ramadan ရှိအစာရှောင်ခြင်းကိုချိုးဖျက်ရန်လူကြိုက်အများဆုံး Moroccan သကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုတိုင်းပြည်ရှိမည်သည့်စျေးကွက်သို့မဟုတ်မုန့်ဆိုင်တွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအရသာအကောင်းဆုံးနည်းမှာကော်ဖီသို့မဟုတ်ပူစီနံလက်ဖက်ရည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကိုဂျုံမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမုန့်စိမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Chebakias ၏မူလထိတွေ့မှုကိုရွှေဝါရောင်၊ လိမ္မော်ပွင့်အပင်၊ သစ်ကြံပိုးသို့မဟုတ်မြေပဲ anise စသည့်နံ့သာမျိုးများကပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤအချိုပွဲသည်ပျားရည်ဖြင့်ပြည့်နှက်ပြီးနှမ်းသို့မဟုတ်နှမ်းစေ့များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ပြင်းထန်သောအရသာနှင့်အချိုပွဲကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်တစ် ဦး ကမွေ့လျော်။
၎င်းသည်မတွန်းလှန်နိုင်သောဒိန်ခဲအကောင်းဆုံး Moroccan သကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်မှကြည်လင်ပြတ်သားပြီးအတွင်းဘက်တွင်အရည်ရွှမ်းသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမုန့်ချိုသောဆံပင်၊ သန့်ရှင်းသောထောပတ်နှင့် akawi ဒိန်ခဲတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရသာဖြစ်သည်။
ချက်ပြုတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် kafeh သည်ရေချိုအနံ့ရည်နှင့်အတူရေလောင်းကာကြိတ်ထားသော walnuts, almond သို့မဟုတ် pistachios နှင့်ဖြန်းထားသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာရှိသောအချိုပွဲသည်တကယ့်အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး၊ သင့်ကိုပထမဆုံးအရှေ့ကိုက်မှအရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအထူးသဖြင့်ရာမဒန်အားလပ်ရက်များတွင်ပြုလုပ်သည်
ပုံရိပ် Mourad Ben Abdallah မှဝီကီပီးဒီးယား
၎င်း၏မူလအစသည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်တည်ရှိသော်လည်း makrud သည်လူကြိုက်အများဆုံး Moroccan သကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Tetouan နှင့် Oujda တို့တွင်တွေ့ရသည်။
၎င်းကိုစိန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး၎င်းင်း၏မုန့်စိမ်းသည်ဂျုံ semolina မှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ရက်စွဲများ၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးများသို့မဟုတ်ဗာဒံသီးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ နောက်ဆုံးထိတွေ့မှုကို makrud ကိုပျားရည်နှင့်လိမ္မော်ရောင်တို့ဖြင့်ရေချိုးခြင်းဖြင့်ပေးသည်။ အရသာရှိတဲ့
ပါတီပွဲမျိုးစုံတွင်ကျက်စားသောမော်ရိုကိုသကြားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ ဗာဒံသီး၊ လိမ္မော်ပွင့်ရေနှင့်သကြားတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွတ်ကီးမုန့်များနှင့်လှော်ခတ်ထားသောကွတ်ကီးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး တည်းစားသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်မုန့်စိမ်းထဲသို့စပျစ်သီးပျဉ်၊ မြေပဲ၊ anise သို့မဟုတ်နှမ်းမျိုးစေ့များထည့်နိုင်သည်။
ဖရဲသီးကိုမွှေးသောအရသာနှင့်အရသာရှိသောအရသာအားလုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ Fez တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည်ကလေးငယ်များအတွက်နံနက်စာအဖြစ်နို့တစ်ခွက်နှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောတွဲဖက်ခြင်းသည်ပူနွေးသောပူစီနံလက်ဖက်ရည်ဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းသာကြိုးစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ပုံမှန်မော်ရိုကိုသကြားလုံးနှင့်အချိုပွဲ